Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) imtixaan | Androidsis
Ka dib markii a qaybta koowaad y ilbidhiqsi kale halkaas oo aan ka wada hadalnay waxa ay naga siin karto terminal-ka, waxaan ku qeexi doonnaa tan seddexaad iyo kan ugu dambeeya waxa run ahaantii lagu sameyn karo qalabkan, shaashadiisa weyn iyo dhammaan fursadaha multimedia waxaa soo bandhigay walaalkan reer Galaxy.
Ciyaaryahan warbaahin ahaan, waxaan ku bilaabi doonnaa ka hadalkeeda kartida muusikada. Lama garaaci karo. ka tayada codka iyo dhamaan fursadaha qaabeynta kuwaas oo bixiya barbaro iyo saamaynta codka ayaa kaa dhigi doonta inaad ku raaxaysato muusikada aad jeceshahay. Faallo isku mid ah ka bixiya fiidiyaha. Waad dhigi kartaa filim kasta oo ku saabsan Galaxy Player taasi ayaa dib u soo saari doonta iyada oo aan dhibaato jirin. Waxaan isku dayay ciyaaryahanka la yimaada qalabka wax dhibaato ahna kuma qabo dhaqaajinta mid 720p HD filim (Dhab ahaantii ma aanan tijaabin 1080p, in kasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn shaashadda 5-inji ah). Sidoo kale waa awood sifiican ugu ciyaar waxyaabaha kujira boggaga internetka. Hadaad hayso arjiga Taxanaha ah ee loogu talagalay Android waxaad awoodi doontaa inaad saacado iyo saacado ku qaadato daawashada taxanaha aad ugu jeceshahay dhibaato la'aan.
Xusuusta ma xuma. Noocani wuxuu leeyahay 8GB ee xasuusta gudaha, oo aad ka haysato wax ka badan 5 bilaash ah alaabtaadaiyo in kabadan 1Gb iyo bar codsiyada. Ma lahaan doontid dhibaato nooc kasta oo ah xusuusta, laakiin haddii aad weli rabto wax badan, waxaad haysataa booska ballaarinta si aad u dhigto microSD illaa 32Gb. Waxaan u maleynayaa in muusikada badan aysan ku siinaynin waqti aad ku dhageysato. Waxaa laga yaabaa haddii aad u isticmaasho inaad filimada geliso SD oo aad ka tagto tan gudaha ee heesahaaga iyo sawiradaada. Dheh, ciyaaraha Gameloft iyo barnaamijyo kale, Waxay adeegsadaan SD-ga gudaha ah si ay u kaydiyaan xogtooda. Codsiyada waa la dhejin karaa si markaa xogtani u tagto microSD. Anigu ma aanan isku dayin, laakiin ahaanshaha, waa ay jirtaa.
Faa'iidada ay bixiso qalabkan xambaarsan Android, ayaa ah marka lagu daro, Waxaad kuheli kartaa wax codsi ah suuqa ama .apk si aad ugu isticmaali karto dhibaato la'aan. Waad ku mahadsantahay shaashadda 5-inji ah, waxaad ka akhrisan kartaa joornaalada aad jeceshahay adigoo adeegsanaya biraawsarka, ka hubi kara quudinta Google Reader, Tweet laba gacmood, si dhaqso leh ugula sheekayso Gtalk .
Kaamirooyinka ay keento ayaa ka badan inta ku filan. Haddaan taas horay u xusay kamarad gadaal oo xoogaa tayo sare leh ayaa la seegay (waxay ku dartaa mid 3.2MPx ah), kani wax dhib ah kuma qabo duubista fiidiyowyada leh tayo ku filan xitaa haddii aysan ku jirin HD sawiraduna way wanaagsan yihiin marka la fiiriyo xalka The kamaradda hore VGA waxay siisaa ciyaar badan markay tahay sameynta wicitaanada fiidiyowga leh Qik Video, ama barnaamij kasta oo kale oo aad isticmaasho.
La interface waa dhakhso, animations wanaagsan, adigoon gaarin darafka HTC Sense, in wax waliba boodayaan wax walbana dhaqdhaqaaq sameynayaan. Isku xirka Touchwiz waa mid aad u wanaagsan inkasta oo laga yaabo inuu yahay xoogaa ka dhiman xagga widget-yada. Waxay si fiican ula shaqeysaa Froyo inkasta oo aanan ogeyn haddii Samsung waligeed cusbooneysiin doonto Gingerbread. Nidaamku waa dhakhso, xitaa wuu falanqeeyaa kaarka microSD si loo helo dhammaan noocyada faylasha faylasha badan oo liis gareeya si uu uga heli karo qolladaha iyo ciyaartoydu si fudud.
Xus gaar ah ayaa mudan Allshare Hore ayaan uga hadlay. Raaxadeeda waa weyn tahay. Waxaad ka ciyaari kartaa dhammaan noocyada feylasha inta u dhexeysa aaladaha kala duwan ee iskudhafan oo aad ka koontarooli karto meel kasta oo aad rabto.
Batariga wuxuu socdaa waqti dheer. Bixinta bakoorad taleefanka iyo ciyaaristiisa dhib badan ayuu qabaa iyo ma imaan karto 6 saacadood oo fiidiyoow ah haddii ay kulmaan. Laakiin iyada oo la tixgelinayo cabirka bahalnimada shaashadda, 2500mAh si fiican ayaa loo qiyaasay. In kasta oo ay run tahay, in kasta oo la tebay, haddana nooc 3G ah oo isku xidhka ka baxsan guriga ma xuma, in kasta oo taasi kordhinayso kharashka.
Ugu dambeyntii, aan ka hadalno waxqabadka. Waan yaabay. Waxaan u maleynayay inay ku adkaan doonto inuu u wareejiyo ciyaaraha GameloftHD shaashadda. Dheh waan qabaa NOVA 2 ayaa lagu rakibay barnaamijkan 'Galaxy Player' mana soo bandhigayso nooc kasta oo dib u dhac ah, dhibaato ama dhibaato kasta oo aad filan karto. Waxay ku qaadan kartaa 5-10 ilbiriqsi in ka badan inta ay ku qaadan laheyd Optimus 2X ama Sensation, laakiin si fiican ayey u ciyaareysaa. Samsung iyada oo loo marayo codsigeeda u gaarka ah ee lagu rakibo barnaamijyada ayaa ku siinaya Glyder 2, Waxay ku saabsan tahay xakamaynta aaladda xawaaraha ee gabadh leh baalal "sixir" ... Hagaag, sheekadu ma xirmayso, laakiin kontaroolada iyo bay'adda garaafka leh, ayaa ka dhigaysa qofka geesiga ahi inuu duulo, isagoo gaadhaya taxanayaal taxane ah, muuji in terminalkani uu yahay heerka kuwa kale oo badan oo suuqa yaala. Jaan-goynta uu soo celiyay Quadrant marwalba wuxuu ka sarreeyaa Galaxy S. Imtixaannada fiidiyowga ah waligood hoos ugama dhacaan 25fps kuwaa oo u baahan waxqabadka ugu badan. Waxaan ka hadleynaa dhibcaha 1120 had iyo jeer, marka la barbardhigo 850 ee walaalkeed ka weyn uu helo (da'da aan weyneyn). Waxaa la arkaa in ARMv7-ka wada MP4-kan uu awood leeyahay xitaa haddii "kaliya" uu aadayo 1GHz iyo "kaliya" uu leeyahay 1 xudun.
Ma kula talin laheyd saaxiibaday inay kuu soo iibsadaan? Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado mid qudhayda. Waxay ku dhow yihiin € 250-280 dukaamada kombiyuutarka badankood. Waa qalab aad u wanaagsan, wuxuu siinayaa ciyaar ka badan "saddexda inji" taleefannada badankood. Raaxo leh akhriska iyo qorista. Saaxiib safar oo aad ufiican muusikada iyo fiidiyaha, ama waqtiga firaaqada. Waa wax walba, oo aad "ku" qaadi kartid jeebkaaga, oo aad ku iibsan karto lacag yar jeebkaaga, adigoon lahayn khidmadaha xogta ama sii joogitaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) tijaabo
Su'aal, haddii aadan haysan 3G, sidee buu u shaqeeyaa khariidadaha google?
Kaliya waxay ku shaqaysaa wifi. Waxaan isticmaalay biraawsar bilaa internat ah, sigyc
soo noqnoqday dijo
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan ka fekerayaa inaan iibsado Samsung-kan, waxaan ka helay 229 XNUMX, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal malaha doqonnimo ah, waxaan haystaa USB-ka internetka ee loo yaqaan 'Vodafone', ma u malaynaysaa inay taasi la socoto mikrosb ilaa adabtarada USB waxaad kuheli laheyd internet-ka qeybta dib-u-sameynta? Waad ku mahadsan tahay oo cafiya haddii su'aashu aysan macno samaynayn
Waxa aad weydiisay waxay iila muuqdaan kuwo xiiso ii leh… aakhirkiina waxaad ku guuleysatay inaad internetka geliso khadkaas ?? .. waad ku mahadsan tahay jawaabta
si qallafsan dijo
Taasi waa Pontevedra.
Salaanta deriska magaalada, toddobaadkan xafladaha.
Ma leedahay twitter?
Ma ogeyn inaan ka sameystay baloog magaaladeyda
Ku jawaab zwrkly
Waxaan hayaa qalabkan waxayna i siisay xoogaa dhibaatooyin ah oo ku saabsan isku dhafka ... runtii waa wax fiican oo aad u dhakhso badan laakiin markaan ciyaaro waxaan lumiyaa jahwareer badan dhibaatadan ... iyo tan kale ee xun ayaa ah ma keenayo autofocus laakiin wali waa sawirro tayo wanaagsan leh
Hal su'aal ayaan haystaa kaniinigan yar waana wax cajiib ah waxaan horey ugu cusbooneysiiyay Kies ilaa 2.3 Gingebread ..!
Hagaag, waxaan rabaa inaan ogaado sidaad ku heshay nova 2. waan raadinayaa mana rakibi karo waxay leedahay odhanaya isma waafaqsana ee adigu ma i caawin kartaa!
Ku soo jawaab Lococorreia
miyaa loo cusbooneysiin doonaa sandwich sand cream ???????
Ku jawaab Danieel Yepezz
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Su'aashaydu maanta waxay ku saabsan tahay cusbooneysiinta Galaxy Wifi 5.0. Waxaan dhawaan ogaaday in aad si rasmi ah uga cusbooneysiin karto Froyo (2.2) illaa Gingerbread (2.3). Laakiin, su'aashayda ugu weyni waxay tahay in lagu cusbooneysiin karo Icewich Sandwich (4.0). Waxaan aqrinayay inay unoqoneyso labada koronto, meelaha qaar waxay dhahdaa waxaan u imid Galaxy S kuwa kale waxay dhahaan kaliya uma soconeyso SGS II mana cadeyn doono hada ... Markaa waxay noqon laheyd mustaqbalka, (hadda xoogaa fog) casriyeynta Galaxy S Wifi 5.0 ilaa ICS (4.0)?
Jawaab Ricardo Da Silva Graça
Muxuu cayaaryahankeyga Samsung Galaxy 50 u raadin waayey shabakadaha?
Ku jawaab martida
Samsung-kayga wax jawaab ahi kamuu bixin laakiin wuu daaran yahay, maxaa dhaca?
Dhibaato ayaan ku qabaa galaxy s 5.0 si aad ah ayuu u xiraa oo dib ayuu u bilaabayaa mana garanayo waxa aan sameeyo si aan u saxo
Ku jawaab Waposf
Waxaan haystaa GALAXY S WIFI 5.0 way shiraysaa waxayna i waydiinaysaa emayl iyo erey sir ah mana xasuusto waxaan sameeyo, sidee ku soo ceshan karaa miiskayga, fadlan caawi
Ku jawaab jovy
Hagaag, waxaan ku iibsaday qalabkan Mexico qalad, qaddar aan ka yarayn 4,000 pesos, taas oo ah, 400 dollars waxaanan gartay inay tahay qaladkii ugu xumaa ee noloshayda maxaa yeelay tiknoolajiyada waxaan aaminsanahay in qalabkani uu ahaa guinea kaliya doofaarka aakhirkiina waxay ku dhaafeen Dhimasho maxaa yeelay ma jiraan wax qalabkan ah oo intaa ka badan oo waxay ka baxday suuqa ha ka iibsan qalabkan wax yeeleynaya inuu yahay Samsung iyo praa cowska ugu dambeeya ee aan galayo. Ma ihi Mexican waxaan ku noolahay Mexico
Ku jawaab runhacker
Shop4Apps: Motorola's App-kiisa App wuxuu kuxiranyahay Latin America